Miyuu Paul Pogba Ogol Yahay Inuu Ku Biiro Juventus Mise Kaliya Real Madrid Ayuu Doonayaa? Wakiilkiisa Mino Raiola Ayaa Jawaab Cad Bixiyay. - Gool24.Net
Miyuu Paul Pogba Ogol Yahay Inuu Ku Biiro Juventus Mise Kaliya Real Madrid Ayuu Doonayaa? Wakiilkiisa Mino Raiola Ayaa Jawaab Cad Bixiyay.
Wakiilka khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Paul Pogba, Ninka lagu magacaabo Mino Raiola ayaa ka hadlay markale arrimaha bixitaanka ee xiddiga uu masuulka ka yahay iyo haddii uu u dhaqaaqi karo kooxdiisii hore ee Juventus.
Pogba ayaa sanadkii 2012 qaab xor ah kaga baxay Old Trafford waxaana uu afar sano oo guul ah isla markaana uu kusoo samaystay magaca uu haatan leeyahay kusoo qaatay Juve oo uu xagaagii 2016 lacag rekoodh ah markale kaga soo laabtay.
Mustaqbalkiisa ayaa markale shaki galay xagaagii dhawaa iyadoo ilaa haatan loo badinayo inuu iskaga huleelayo United suuqa soo socda, Juventus iyo Real Madrid ayaa ah labada kooxood ee loo badinayo inuu midkood ka ciyaari doono.
Haddaba, Wakiil Raiola oo dhawaan saxaafada u warramay ayaa sheegay in marka laga yimaado in aad loola xidhiidhinayo xiddigiisa Real Madrid sidoo kale uusan waxba ka qabin ku laabashada Juventus dalka Talyaaniguna uu sida dalkiisa oo kale u yahay.
Raiola ayaa yidhi “Italy sida dalkiisa oo kale ayuu u yahay Paul, Isagu waxba kama qabi doono ku laabshada Juve laakiin waynu arki doonaa waxa dhici doona Euro-da kaddib”.
“Paul waxa uu doonayaa inuu ciyaaro heerkiisa ugu wanaagsan laakiin isagu kama baxsan karo Manchester United haddii ay ku jirto xaalad adag”.
Xagaagii hore ayay ahayd markii Pogba iyo Raiola ay si wada jir ah u qabsadeen boggaga hore ee saxaafada kaddib markii ay xuseen in Pogba uu doonayo ka ciyaarista loolan cusub.